ဤသည်ကိုပြောရန်၊ နားလည်ရန်နှင့်ထပ်လောင်းအတည်ပြုရန် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အလွန်များပြားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများစွာနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်လူအများအပြားကအလွန်သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစိတ်အစွဲများဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာရှိသည်။ အများစုသည်လူသစ်များမှလာသည်။ ငါဒါကိုသဘောမပေါက်ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကသဘာဝအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ၊ မင်းဟာမင်းအတွက်အသစ်အဆန်းပဲ၊ 100% ပြည့်ဝအောင်အပြည့်အ ၀ သွားချင်တယ်။
အဘယ်အရာကိုသဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါသည်ဤဖြစ်ပါသည်: ဤသည်အလွန် ... အလွန် ... ရိုးရှင်းတဲ့e။
1 Step: ညစ်ညမ်းမကြည့်ပါနဲ့။
(လိင်သင်သည်လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်လူတစ်ဦးအတွက်အခြားလူသားတွေနဲ့တရင်းတနှီး bonding ပါဝင်ပါဘူးတစုံတခုကိုမျှ)
အဆင့် 2: masturbate မထားပါနဲ့။
(တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပါ၊ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သောအရာအားလုံးအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်သူသည်ဆင်းရဲသောသူကိုအနားယူပါစေ၊ သူ့ကိုသင်အလုံအလောက်ရိုက်နှက်ပြီးပြီ)
ယခုဤအရာကိုနားလည်ထားပါ။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင်၏ပြင်ဆင်မှုကိုရရန်အတွက်မြင်နိုင်သောကွင်းဆက်အပေါက်တစ်ခုစီတိုင်းကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာချိန်းတွေ့ခြင်းဆိုဒ်များ၊ စကားပြောခြင်း၊ အစရှိသဖြင့်ကလပ်များ၊ ထိုအခါသင်သည် ABORT မှတဆင့်လိုက်လျှောက်ရန်မဟုတ်! “ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်လောက်ကြာကြာလုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်တော့ငါပြန်ရနိုင်မှာလဲ” သင်ပြန်လည်ကျန်းမာလာသည်ကိုစဉ်းစားစရာမလိုဘဲရက်ပေါင်း ၉၀ မအိပ်ဘဲသွားပါ။ အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူရန်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ခန့်ကြာနိုင်သည်။ သို့သော်သင်သည်ဤစွဲလမ်းမှု၏နက်ရှိုင်းမှုအောက်တွင်ရှိနေပြီး MINIMUM ရက်ပေါင်း ၉၀ မှစပြီး pmo no လုံးဝသွားရန်လိုအပ်သည်။ ရက်ပေါင်း ၁၂၀ တွင်ပျမ်းမျှနှင့်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အထက်ရှိသောကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောဆင်းရဲသော bastards များအတွက် ... ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလပြီးနောက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်သတိကြီးစွာပြန်လည်ဆက်သွယ်ပြီး“ ရင်းနှီးမှု” ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုရှာဖွေပြီးနေ့စဉ်ပြန်လည်ဖတ်ပါ။
ယောက်ျားတွေအများကြီးဟာအသေးငယ်ဆုံးအရာတွေကိုစိတ်စွဲလမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ “ ငါဟာတစ်ပတ်လုံးလုံး pmo မသွားဘဲတစ်ဝက်လောက်နိုးလာတယ်၊ ငါပြန်ကောင်းလာပြီလို့ထင်သလား?” “ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကကျွန်ုပ်ဘဝကိုပျက်စီးစေသည် !!!!” “ အိုဘုရားသခင်၊ ကျွန်မရဲ့ libido ပျောက်ကွယ်သွားပြီလား၊ အေး ... အေး၊ အဆင့်သုံးဆင့်လုပ်ပါ။ သင်မတွေ့ကြုံဖူးသောအရာများကိုသင်တွေ့ကြုံရလိမ့်မည်။ သင်၏နှစ်ပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်မှုစင်တာများကိုသင်အလွဲသုံးစားပြုခဲ့ပြီးသင်ပစ္စည်းအချို့ကိုသင်သွားရတော့မည်ဖြစ်သည်။
ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဟုတ်ပါတယ်, ပြန်လည်နာလန်ထူမဆိုစွဲကနေခဲယဉ်းပေမယ့်သုညဖြတ်လမ်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှာဖွေနေရပ်တန့်။ ၎င်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းလိုက်နာပါ ဘဝကိုနဲ့အတူပေါ်ရွှေ့။ ဤအရာအားလုံးကိုစိတ်စွဲလမ်းသောယောက်ျားများသည်သင် pmo မလုပ်ရန်ခက်ခဲသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်သည့်ဘ ၀ များကိုတည်ဆောက်ရန်၊ ဝါသနာအသစ်များယူရန်၊ အရာများနှင့်ပါ ၀ င်ရန်၊ သင်တစ်ခါမျှမလုပ်ဆောင်ဖူးသောအရာများကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းအသစ်များတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ LIFE LIFE ။
မင်းလုပ်နေတာမသေချာဘူးလား။ ရိုးရိုးလေးအဆင့်သုံးဆင့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးသားပါ။အဲဒါကိုလုပ်ဖို့မှလွဲပြီးအခြားဘာမှမဟုတ်ပါဘူး.